३ अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै सिद्धार्थ बैंक — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बैकिङ > ३ अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै सिद्धार्थ बैंक
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र (डिवेञ्चर) निष्कासन गर्ने भएको छ । ऋणपत्र निष्कासनका लागि रेटिङ गरेको छ । इक्रा नेपालले ऋणपत्रलाई न्यून जोखिम जनाउने ‘इक्रा एनपी एलए’ रेटिङ दिएको हो ।
बैंकले ऋणपत्र बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा ३० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । यसमध्ये १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि खुला हुनेछ । बाँकी १८ लाख कित्ता संघसंस्थालाई बिक्री गरिने छ ।
यस ऋणपत्रमा वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदर पाइने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ७ वर्ष अवधिको सिद्धार्थ बैंक डिबेन्चर २०८४’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम एनएमबि क्यपिटल लिमिटेडले गर्ने छ ।
२०७७ भदौ २१ गते १५:१९ मा प्रकाशित
नेप्सेमा दुई कम्पनीको ७७ लाख ८३ हजार कित्ता बोनस शेयर सूचीकृत, कुनको कति ?
शेयर बजार वृद्धिमा ‘ब्रेक’ : दोहरो अंकले घट्यो, बजार घटेपनि २ अर्ब ७८ करोड बराबरको कारोबार
अन्ततः दशैँअघि नहुने भयो त्रिविका स्थगित परीक्षा !
एनआईसी बैंकको जापानबाट इनवार्ड रेमिट्यान्स सेवा सुरु, यस्ता छन सुविधाहरु